WAR-SAXAAFADEED Kulan Saddex-Geesood ah oo ka dhacay Xarunta Madaxtooyada oo u dhexeeyey Xukuumadda, Ganacsatada Xoolaha dhoofiya iyo Masuuliyiinta Maxjarrada Berbera. |
WAR-SAXAAFADEED Kulan Saddex-Geesood ah oo ka dhacay Xarunta Madaxtooyada oo u dhexeeyey Xukuumadda, Ganacsatada Xoolaha dhoofiya iyo Masuuliyiinta Maxjarrada Berbera.
Hargeisa (GNN)- Xarunta Madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland waxa 03.01.2017-ka; ka dhacay kulan ballaadhan oo Saddex-Geesood ah oo u dhexeeyey Xukuumadda, Ganacsatada Xoolaha Nool dhoofiya iyo Masuuliyiinta Maxjarrada Berbera. Ujeedooyinka ugu muhiimsan ee kulankaasi loo qabtay waxay ahaayeen: